Covid-19 Yopararira Zvinotyisa kuMamisha
Nyanzvi munyaya dzezvehutano dziri kukurudzira hurumende kuti isimbaradze kudzidzisa nekubaya nhomba yeCovid-19 vanhu vari kumaruwa sezvo chirwere ichi chave kupararira zvinotyisa munzvimbo idzi.
Kumaruwa ndiko kunogara vanhu vakawandisa munyika. Nyanzvi munyaya dzezvehutano uye vakambotungamira chipatara cheChitungwiza Hospital Dr Enoch Mayida vanoti kamhando katsva keCovid-19 kanonzi Delta variant kave kupararira muZimbabwe, Namibia, South Africa, Congo, Mozambique neUganda ndiko kave kupa kuti zvinhu zviite manyama amire nerongo mumaruwa nedzimwe nzvimbo.
Vanamazvikokota munyaya dzezvenhomba vachiri kuzeyawo kuona kuti nhomba dzeCovid-19 dziri kubayiwa vanhu dzinoshanda here kudzivirira Delta variant iyi.
Imwe yanzvi munyaya dzezvehutano uye vari nhengo yesangano reZimbabwe Association for Doctors for Human Rights, Doctor Norman Matara, vati denda rave kupararira kumaruwa nekuti mwaka wekurima wakapfuura nekudaro vamwe varimi vari kushanyira kumadhorobha vachitengesa zvirimwa zvavo nokudaro vanogona kubva vabatira chirwere vozondopomera vamwe kumusha.
Bazi rezvehutano riri kushushikanawo nekuungana kwevanhu zvikuru parufu zvinogona kukonzera kuaparira kwechirwere ichi kumaruwa. Vanhu vanonzi havafanire kudarika makumi matatu pakuchema mufi.
Vamwe vagari kumaruwa zvikuru kuMasvingo vaudza Studio 7 kuti havasi kufara sezvo hurumende isiri kuvapa nhomba dzakawanda dzekudzivirira kupararira kwedenda reCovid-19 uye vachiti zviri pachena kuti nzvimbo idzi hadzinawo zvipatara zvakakwana zvekubatsira vanenge varwarisa.
Vagari vakaita saAmbuya Rosina Gonese, vekwaBhasera, kwaGutu, vanoti chirongwa chenhomba hachisati chasvika kunzvimbo yavo nekudaro vanonamata kuti dai chakurumidza kuuyiswa.
Izvi zvatsigirwa VaAbraham Moyo vatiwo zvakakosha kuti vari kumaruwa vapihwewo nhomba dzakawanda.
Mutauriri weCovid-19 taskforce muMasvingo, VaRogders Irimayi, vanoti hurumende iri mubishi rekusvitsa chirongwa chekubaya vanhu nhomba munzvimbo dzese dzedunhu ravo.
VaIirmayi vanoti svondo rapera kwakauya nhomba inosvika chiuru gumi nemakumi mashanu, 15 000 uye vakamirirawo kuzopihwa imwe yakawanda kubva pamamirironi maviri akapindawo munyika mazuva adarika.
Vaenderera mberi vachiti hurumende iri kufara kuti vanhu vakawanda vave kuda kubaiwa nhomba vachiti izvi zvichabatsira kudzivirira kutapuriranwa kwechirwere cheCovid-19.
Nezuro vanhu makumi mapfumbamwe vakabatwa nechirwere ichi mudunhu rose
reMasvingo, Gutu,yaive nemakumi matatu nevatanhatu, Masvingo ine makumi matatu nevashanu, Chiredzi ine gumi nevasere uye Mwenezu ine mumwechete.
Hurumende inoti inoda kubaya vanhu mamirioni gumi nenhomba munyika
yose kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana senzira
yekudzivira denda iri.
Bazi rezvehutano rinoti dzimwe nzvimbo dziri kumaruwa dzasangana nedambudziko guru rechirwere cheCovid-19 dzinosanganisira Mazowe kuMashonaland Central, Kasimure kuMashonaland West uye Murehwa kuMashonaland East neGokwe kuMidlands.